Inkonzo yasemva kwentengiso -Izithuthi zaseMpuma kwiZizwe ngezizwe i-Co, limited
NjengamaLori asemthethweni ase China, iitreyila / izithuthi, oomatshini, kunye neendawo zokungcebeleka ezithunyelwa ngaphandle yinkampani, luxanduva lwethu ukukhathalela abathengi bethu ngezixhobo zabo kunye nezixhobo eziqhuba zikwimeko entle ixesha elide.
Njengoko ubona kwiphepha lewebhusayithi yethu, siya kunika iindawo zokugcina izimahla kubaxumi bethu ngexesha ababeka iodolo kuthi. Sinokubonelela ngezixhobo zokuqala kubathengi bethu kule minyaka ilandelayo.
Ukuba kunyanzelekile kwaye kufuneka, singathumela amagcisa ethu kwindawo yethu yabathengi ukuba sinike uqeqesho kunye nokwenza umboniso wokulungiswa kunye nendlela yokwenza ulondolozo.
Nanku kanye lo mzuzu amagcisa ethu kwindawo yabathengi esenza uqeqesho kunye nokulungiswa.
(Sombulula ingxaki yefektri yomzi mveliso wabathengi, Philippines)
Ukulungisa iseti yomvelisi ePhilippines
(jonga inkqubo yekhompyuter yomatshini)
(Ukuvavanya ukufikelela kwilori eDubai)
(bonelela ngoqeqesho eBangladesh)
(Abathengi abatyeleleyo eBangladesh)
Ngexesha le-2020, kunyaka ophelileyo, ishishini labathengi bethu lenzeke nzulu kakhulu, ke ezo mali zabo zijamelene neengxaki ezinkulu, kodwa iilori kunye noomatshini bafuna iindawo zokugcina kunye nolondolozo ukuze basebenze ngendlela elungileyo, kungoko sincama umda wethu kunye nezibonelelo ukunceda abathengi bethu ngaphandle kwexesha elinzima.
Ngoku ngu-2021, yonke into iya isiba ngcono kwaye ibengcono, thina njengomboneleli othembekileyo kubathengi bethu phesheya, siqala ukufumana iiodolo ezingakumbi. Siyathemba ukuba singangaphezulu kwabaxhasi kunye nababoneleli-- Sonke singabahlobo kolu shishino.
Ukuba ungathanda ukujoyina kwaye ufune isisombululo kwiiprojekthi zakho, unokuziva ukhululekile ukuqhagamshelana nathi kwaye usithumele imibuzo.
I-Oriental Vehicles International Co, limited, umthengisi wezithuthi kunye nokunikezela ngesisombululo, kunye nokunikezela ngenkonzo yasemva kokuthengisa (iinxalenye zomthengisi), zeshishini lakho.
Ungasithumela umbuzo wakho malunga neenxalenye zokusithumela ngokuthumela i-imeyile. Sijonge phambili ekusebenzisaneni nawe.